माइक्रोसफ्टको भूतल ल्याप्टप inbuilt विन्डोज 10 निर्दिष्टीकरण | यो
माइक्रोसफ्ट सर्फेस ल्याप्टप यहाँ छ, र यो एकछिन विन्डोज 10 एस माइक्रोसफ्ट नयाँ सर्फेस ल्याप्टपलाई विन्डोज 10 एसको साथमा माइक्रोसफ्टका लागि शिक्षाको लागि माइक्रोसफ्टमा न्यूयर्कमा घोषणा गरिएको छ, र यो उत्पादनको बेजोड गुणस्तर चुनौती Google Chromebooks र Apple's MacBooks अमेरिकामा निर्देशन भागमा।
भूतल ल्याप्टप तथापि pricier को एक मामला को रूप मा छ, र माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष भूतल कम्प्यूटिंग Panos Panay के लिए यह परिचय के दौरान स्पष्ट, यह डिवाइस Apple MacBooks ले रहा है। माइक्रोसफ्ट भन्छन् कि भूतल ल्याप्टप बजारमा कुनै म्याकबुक भन्दा पतला र हल्का छ, र यो वर्तमान म्याक बुक एयर भन्दा तेज छ।
वर्तमानमा भूतल ल्यापटपले पनि Windows विन्डोज 10 S चलाउँछ, जुन मानक विन्डोज 10 भन्दा धेरै छिटो स्ट्रिङ छ, र केवल Windows स्टोरबाट अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्दछ। विन्डोज 1O S को साथ तपाइँ केवल अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्नुहुन्छ जुन माइक्रोसफ्टले पुष्टि गरेको छ। घटनामा तपाईंले स्टोरको बाहिरबाट केहि चीज चलाउन आवश्यक पर्दछ, तपाइँलाई Windows 10 प्रो माथि बढ्न आवश्यक छ र संगठनले ग्राहकहरूलाई छनोट दिन्छ। नोट लिनुहोस्, विन्डोज 10 प्रो ओवरहाल केवल डिसेम्बर 31, 2017 सम्म छ। सतह ल्याप्टप अतिरिक्त रूप देखि एक वर्ष को कार्यालय 365 व्यक्तिगत मुक्त संग।
अनुसार माइक्रोसफ्ट, अनुप्रयोगहरूले "माइक्रोसफ्ट-पुष्टि सुरक्षा र निष्ठा" को ग्यारेन्टी दिन्छ। यस अतिरिक्तले यो हो भने तपाइँ यी ल्याप्टपहरूमा क्रोम वा फायरफक्स डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न सक्नुहुन्न, र माइक्रोसफ्ट एज डिफल्ट प्रोग्राम हो।
विन्डोज 10 एस संगठनको वितरित भण्डारण व्यवस्थासँग एकीकृत छ, जुन OneDrive हो त्यसैले तपाइँको रेकर्डको प्रत्येक एक क्लाउडमा बसालिएको छ र विभिन्न यन्त्रहरूबाट खुला छ।
त्यसैले विवरण के हो ल्याप्टप सतह? यी यन्त्रहरूको लागि सुरु हुने लागत के हो?
माइक्रोसफ्ट सर्फेस ल्याप्टप $ 999 मा सुरू हुने र $ 2199 सम्म दूरी माथि जानुहुन्छ जुन तपाईले यस यन्त्रको लागि सेट अप को सेटअप गर्दछ।
इंटेल कोर ग्राफिक्स5को साथ 128GB SSD भंडारिंग र 4GB RAM संग इंटेल कोर I620 को $ 999 लागत हुनेछ। माइक्रोसफ्टको साइटको अनुसार, यो मौलिक मोडेल केवल छाया प्लेटिनममा आउनेछ। इंटेल एचडी ग्राफिक्स5को साथ 256GB SSD र 8GB RAM संग इंटेल कोर I620 $ 1299 को लागत हुनेछ र चार छायांकन प्रत्येक मध्ये प्रत्येक मा आउनेछ जो ब्रुगुडी, प्लेटिनम, कोबाल्ट ब्लू, ग्रेफाइट गोल्ड हो।
ल्याप्टप सतह त्यहि तरिकाले Windows 10 S चलाउँछ, जुन अनुकूलन विन्डोज 10 भन्दा स्ट्याक गर्न छिटो छिटो छ, र केवल Windows पसलबाट अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्दछ।
इंटेल कोर आईएक्सएनमएक्स क्षेत्र इंटेल इरिस7को दृष्टान्त संग 640GB SSD + 1599GB RAM अनुकूलन को लागि $ 256 मा शुरू हुन्छ। यो केवल छाती प्लेटिनम मा आउछ र $ 8 खर्च गर्दछ। 1,599GB RAM + 16GB SSD rendition, जो कि छायांकन प्लेटिनम मा पनि त्यहि पहुँच छ $ 512 लागत हुनेछ।
वर्तमान में भूतल ल्याप्टप 13.5-inch PixelSense प्रदर्शन को एक्सन 2256 एक्स 1504 पिक्सेल निर्धारण संग, जो 201 पीपीआई मा कार्य गर्दछ। शो 10 प्वाइन्ट बहु-स्पर्श bolsters छ, र एक 3:2कोण अनुपात र सतह पेन यो पनि चिप हुनेछ।
इंटेल कोर i7 क्षेत्र इंटेल इरिस प्रतिनिधित्व संग 1599GB SSD + 256GB RAM संस्करण को लागि $ 8 मा सुरू हुन्छ।
यस सतह ल्याप्टप को लागि माप 308.1 मिमी एक्स 223.27 मिमी एक्स 14.48 मिमी, र यो 1.252 ग्राम वजन। यसमा एक USB 3.0 पोर्ट, हेडसेट जैक, मिनी डिस्प्लेर्ट, सतह जडान पोर्ट छ, र सतह डायल र सतह डक संग राम्रो छ। माइक्रोसफ्ट ले ल्याप्टपको साथ 14.5 ब्याट्रीको अवतरणको प्रतिज्ञा गर्दछ।
यो ल्याप्टप सतह साथमा विन्डोज हेल फेस फेस इन-क्यामेरा, 720P HD क्यामेरा (अगाडिको सामना)
स्टीरियो माइक्रोफोन। यसमा ओम्निसेनिक स्पिकरहरूसँग डल्बी ओडियो प्रीमियम छ। WiFi अगाडि, यसमा 802.11ac Wi-Fi वायरलेस नेटवर्किंग छ; आईईईई 802.11a /b/ g / n राम्रो र यो थप ब्लुटुथ 4.0 LE bolsters।
यो ल्याप्टप अहिले अमेरिकामा पूर्व व्यवस्थित गर्नका लागी, र जून 15, 2017 बाट ढुवानी सुरु हुनेछ।
MCSA प्रमाणित व्यावसायिक - साक्षात्कार प्रश्न र उत्तर